LVD-08 नयाँ डेडबोल्ट लक चाँडै आउँदैछ
LVD-08 Deadbolt ताला अमेरिका को बजार को लागी भेटिन्छ। LEI-U टीम यस शैली लक को विकास को लागी दुई बर्ष बिताईयो र सेप्टेम्बर मा प्रकाशित गरिनेछ।
फिंगरप्रिन्ट तालाहरु सामान्यतया स्टेनलेस स्टील ताला जीभहरु बाट बनेको हुन्छ, तर अधिकांश फिंगरप्रिन्ट तालाहरु एकल ताला जीभ, एकल ताला सजिलै संग खोलिन्छ, वा विरोधी चोरी र विरोधी दंगा प्रदर्शन हासिल छैन। बहु बिन्दु लक जिब्रो संग फिंगरप्रिन्ट लक टाढा सम्म सबै भन्दा राम्रो र उच्चतम सुरक्षा प्रदर्शन द्वारा छ। त्यसैले एक औंठाछाप लक छनौट मात्र उपस्थिति मा देख्दैन, यो भित्र मा निर्भर गर्दछ।
हराउने वा तपाइँको चाबीहरु बिर्सने दिनहरु समाप्त भयो जब तपाइँ एक स्मार्ट लक स्थापित छ। तपाइँ टाढा टाढा लक गर्न सक्नुहुन्छ र संसारको कुनैपनि ठाउँ बाट तपाइँको ढोका अनलक गर्न को लागी कसैलाई, जस्तै एक घरकीपर वा रखरखाव मर्मत व्यक्ति। जब उनीहरु जान्छन् तपाइँ ढोका ताला लगाउन सक्नुहुन्छ ताकि तपाइँलाई थाहा छ तपाइँको घर सुरक्षित छ।
स्मार्ट लक सबै रूपहरु मा आउँछ - deadbolts वा levers - र र so्ग ताकि तपाइँ तपाइँको स्मार्ट घर को लागी सबै भन्दा राम्रो विकल्प को चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रश्न: स्मार्ट लक को मूल्य कति छ?
बुद्धिमान ढोका ताला र परम्परागत मेकानिकल ढोका तालाहरु बीचको फरक प्रयोगकर्ता पहिचान, सुरक्षा, र व्यवस्थापन को मामला मा अधिक बुद्धिमान छ। स्मार्ट घरहरु को लोकप्रियता संग, हामी बस्ने वातावरण को सुरक्षा को लागी धेरै उच्च आवश्यकताहरु छन्, त्यसैले धेरै परिवारहरु विरोधी चोरी को लागी स्मार्ट ढोका तालाहरु स्थापित गर्न को लागी छनौट गर्नेछन्, स्मार्ट ढोका लक युग कुञ्जी समस्याहरु लाई बिदाई, मात्र औंठाछाप चाहिन्छ, पासवर्ड वा रिमोट कन्ट्रोल ब्रश र अन्य निजीकृत तरीकाहरु ढोका खोल्न सक्छन्, न केवल वास्तविक जीवन मा प्रयोग गर्न को लागी अधिक सुविधाजनक छ, तर यो पनि कुनै सुरक्षा जोखिम छोड्ने छैन। स्मार्ट ढोका तालाहरु को फराकिलो आवेदन संग, हामी पनि यस्तो प्रश्नहरु छन् जब खरीद। स्मार्ट ढोका ताला को मूल्य के हो?
आजकल, बुद्धिमान ढोका ताला बनाउने स्तर धेरै सुधार गरीएको छ, र ब्रान्ड र उत्पादनहरु को मोडेल पनि बढ्न थालेको छ। बिभिन्न निर्माताहरु बिभिन्न निर्माण प्रविधिहरु र स्मार्ट ढोका ताला बनाउन को लागी प्रयोग गरीएको सामग्री छ। त्यहाँ स्मार्ट ढोका ताला को मूल्य मा पनि ठूलो मतभेद छन्। यसको अतिरिक्त, जब स्मार्ट ढोका लक किन्ने, यो पनि जान्न को लागी मूल्य स्मार्ट ढोका लक को प्रकार्य को माध्यम बाट उचित छ कि छैन आवश्यक छ। एक अपेक्षाकृत पूरा प्रकार्य संग स्मार्ट ढोका लक को मूल्य थोरै अधिक छ।
स्मार्ट लक को मूल्य को बारे मा? यो महँगो छैन। जब हामी स्मार्ट ढोका तालाहरु किन्छौं, हामी स्मार्ट ढोका तालाहरु को उत्पादन टेक्नोलोजी को संयोजन र उनीहरुको मूल्य मापन गर्न को लागी सामग्री को ध्यान मा ध्यान दिन आवश्यक छ। यसको अतिरिक्त, मूल्य र स्मार्ट ढोका ताला को ढोका ताला को प्रकार्य पनि सीधा सम्बन्धित छ।
पोस्ट समय: अगस्ट-24-2021